Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka: La Wareegidda Kulyadda Jaalla Siyaad waa tillaabo Amni oo Dawladdu Horay U Qaaday – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka: La Wareegidda Kulyadda Jaalla Siyaad waa tillaabo Amni oo Dawladdu Horay U Qaaday
Muqdisho (SONNA)Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo maanta ka qayb galay munaasab ciidanka xoogga dalku ay ciidamada nabad ilaalinta midawga Afrika (AMISOM) kala wareegayeen xarunta Tababarka Meleteriga ee Jaalla Siyaad, ayaa sheegay in dawladdu ay tillaabo wax ku ool ah u qaaday qorshaha ay kula wareegayso mas’uuliyadda amniga dalka.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa munaasabadda ka sheegay in la wareegidda Kulyadda jaalla siyaad oo kamid ahayd Academia meleteriga ee ugu wanaagsan qaaradda Afrika, ay qayb ka tahay Meel marinta iyo hir-galka Qorshaha amniga qaranka, xilliga kala guurka, iyo hir-gelinta guud ahaan halbeegyada tubta amniga iyo caddaaladda.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in qorsha ay Soomaaliya amnigeeda kula wareegayso sugidda amniga dhulkeeda iyo mawaadiniintiisa uu u hir-gelayo tillaabo tilaabo, ugu dambaynna qorshahaasi uu guulaysan doono.
Xarunta tababarka ciidanka xoogga ee Jaalla Siyaad oo ahayd meel taariikh wayn leh, ayuu Ra’iisul Wasaare ku-xigeenku sheegay in ay muhiim u ahayd tababarka ciidanka iyo saraakiisha ciiddanka xoogga dalka, sidoo kalana horay loogu tababaray ciidamo iyo saraakiil ka socday waddamada Burundi, jabuuti, Namibia iyo Rwanda, arrintaas oo muujinaysa in Soomaaliya ay qayb muhiim ah kasoo qaadatay amniga iyo jiritaanka ciidan ee Afrika.
Dhanka kale, Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in awoodoodii Shabaab la wiiqay oo la gala wareegay fariisimihii ay kasoo duullaan tegi jireen hase yeeshee ay billaabeen qorsha kale oo ay ku xasuuqayaan haweenka, caruurta, dadka waayeelka ah iyo dhammaan dadka biri magaydada ah.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa mawaadiniinta Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay ka dhiidhiyaan dhaqanka gurracan ee arxanlaawayaasha diin laawayaasha ahi ay ku gumaadayaan umadda Soomaaliyeed.